Ukuthengiswa kweBhajethi yokuThengisa iMoto - Used Cars
Izinto Zakudala Imiboniso Yesilayidi
Ukuthengiswa kweBhajethi yokuThengisa iMoto
Thenga imoto yoHlahlo-lwabiwo mali!
Ukuthenga isithuthi sangaphambili esiqeshisayo kunokubonakala ngathi ngumbono ombi kwabanye abantu, kodwa ukuthengisa imoto yoHlahlo-lwabiwo mali kuzalisa iinqwelo-mafutha zazo rhoqo, zibeka iimoto zazo eziqashisayo ngamaxabiso afikelelekayo. Abanye banayo iwaranti yomenzi esele isenza ukuba bathenge izinto ezilungileyo.
Ukufumana phi ukuThengiswa kweMali yokuThengisa iMoto
Imoto yoHlahlo-lwabiwo mali
Ukuqesha imoto kwiBhajethi - Amaqabane ohlahlo-lwabiwo mali Ukuzenzekelayo ukuthengisa iiyunithi zezithuthi xa bekulungele ukuphinda bagcine uluhlu lweempahla zabo ngezithuthi ezitsha. Tyelela Uhlahlo-lwabiwo mali / Ukuzenzekelayo kwaye ufumanise ukuba ungakhangela njani kwi-inventri yazo kwaye ube nommeli wentengiso onxibelelana nawe. Uyakufumana ukujongana okuhle kwiGeneral Motors, iToyota, Chrysler, kunye neemoto zeFord ngamaxabiso asezantsi kakhulu. Uninzi lwezithuthi ezivela kwintengiso yoqeshiso lweemoto ezithengisayo zinewaranti eseleyo yokudlulisa kwaye i-Autonation inokukunceda ukuba uxhase ngemali yemoto eqeshisayo.
Iingcebiso ngabasetyhini abathenga iimoto ezisetyenzisiweyo
Imbali yeZithuthi zeFord
Yila imoto eyiyo
Uninzi lweevenkile ezithengayo zithenga izithuthi kwiBhajethi yeMoto. Benza oku ngokusebenzisa iifandesi ezikwi-Intanethi nakwiziza ezingavulelekanga eluntwini. Abathengisi bathenga ezi zithuthi zangaphambili zokuqeshisa ngamaxabiso athotyiweyo kwaye baphinde bazithengise kumasebe abo eemoto. Ukuba ufuna ukuthenga imoto eqeshisayo yoHlahlo-lwabiwo mali kubarhwebi, tsalela umnxeba i-GM, Ford, iToyota okanye abathengisi baseChrysler kwindawo yakho ubuze ukuba bayathengisa na. Gcina ukhumbula ukuba abathengisi baya kuphawula ixabiso lezi zithuthi ziqeshisayo ngaphezulu kwe-Autonation, abadibana noHlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa izithuthi eziqeshisayo ezidla umhlala-phantsi.
Ngaba kukhuselekile ukuthenga imoto yokuqasha?
Ukuba uthenga imoto yangaphambili yohlahlo-lwabiwo mali ngokuthe ngqo kwi-Autonation, benza inkonzo epheleleyo ngomatshini oqeqeshiweyo ngaphambi kokuba bafumaneke. Cela ukubona imbali yokulungisa isithuthi kubandakanya naziphi na iingxelo zomonakalo.
Ukuba uthenga kumthengisi, abanye bayayilungiselela imoto ngaphambi kokuba ithengiswe, nangona kunjalo, ayisiyiyo iyafuneka ukuya. Ukukhonza kunye nokuchaza izithuthi ezisetyenzisiweyo yindleko yazo zonke iivenkile ekufuneka zenziwe ukubanceda bathengise uluhlu lweempahla abazisebenzisileyo. Oku kubizwa ngokuba lixabiso lokuphindisela, ke buza umthengisi ukuba loluphi uhlengahlengiso olwenziwe kwisithuthi.
Naphi na apho uthatha isigqibo sokuthenga imoto eqeshisayo, cela abameli bezentengiso ukuba baqhube ICarFax ingxelo. Ukuba abanakho ukufikelela kwiCarFax, bacele inombolo yesazisi okanye iVIN, kwaye undwendwele ICarFax ngokwakho ukuthenga ingxelo. Iingxelo zembali yezithuthi zibandakanya ulwazi olubalulekileyo njengabanini bangaphambili, iwaranti kunye nembali yokulungiswa kokukhumbula kunye nayo nayiphi na imbali yengozi.
Ufanele Uhlawule malini?
Ngaphandle kokuba unelungu losapho okanye umhlobo osenyongweni oneshishini lokuthengisa, abathengisi bathengisa iimoto ukwenza imali ukuze ugcine oko engqondweni xa uthenga. Xhobisa amaxabiso emoto asetyenzisiweyo ngokundwendwela Edmunds , iwebhusayithi esetyenziswayo entsha, kwaye ufumane amaxabiso ezinto ezenziwayo kunye neemodeli onomdla kuzo. Khumbula, uninzi lweemoto eziqeshisayo ziya kuba yimodeli zonyaka kamva zemoto ukusukela kwiminyaka ka-2007 ukuya ku-2009. Ungalindeli ukufumana irente. imoto iyathengiswa indala kakhulu kunaleyo. Uninzi lweenkampani zeemoto eziqeshisayo, kubandakanya iBhajethi, zithengisa izithuthi xa ziphuma ngaphezulu kwe-15,000 ukuya kwi-30,000 yeemayile.
Khangela ukwenza ngaphezu kwesinye kunye nemodeli Edmunds kwaye uprinte uphando lwakho. Khumbula ukuba u-Autonation kunye nabathengisi abathengisa iimoto eziqeshisayo zoHlahlo-lwabiwo mali baya kuba nokukhetha okuncinci kwezi zithuthi abanokukhetha kuzo kunezinye ezisesitokisini ezisetyenzisiweyo abazifumene njengorhwebo. Ngelixa unokonga imali, zilungiselele ukukhetha kwimodeli okanye kwimodeli enokuthi ingabi lukhetho lwakho lokuqala. Funda isikhokelo sethu sokuthenga kwiimoto esele zisetyenzisiwe ngaphambi kokuba wenze uhambo lokuthenga loo moto irente.
Qesha ngaphambi kokuba uthenge
Enye indlela enkulu yomthengi wemoto eqeshisayo kukuya kuHlahlo-lwabiwo mali kwaye uqeshe enye yezithuthi zabo ngaphambi kokuba uyithenge. Nokuba uyiqeshisa usuku olunye, unokufumana umbono wentuthuzelo kunye nokusebenza kwesithuthi ngaphambi kokuthenga.
Ukuthenga isithuthi ngokuqesha uhlahlo-lwabiwo mali lokuthengisa kunokugcina imali, kwaye unokuba nesithuthi esineemayile eziphantsi kwaye mhlawumbi newaranti eseleyo. Yiba ngumthengi okrelekrele ngaphambi kokuba uthenge kwaye ucinge ngokuthengwa kwemoto yakho njengokuthenga okukhulu, ke kufuneka ubeke inkuthalo efanelekileyo kuqala.
Ukuhamba Ngenqanawa Cruise Destinations Uxinzelelo Slideshows Yonke Malunga Bollywood Special Occasion Decorating Ukuqokelela
ubhala njani isicakakazi sentetho ehloniphekileyo kusisi
ubunzima obuqhelekileyo kumfazi oneminyaka eli-16 ubudala
ungabona njani ukuba ngubani ojonga iprofayile yakho ye-twitter
yeyiphi iminyaka onokuthi uphume ngayo ngemvume yomzali
Uyenza njani ivodka yemartini eyomileyo